Gurgaon & ဒေလီ nCr, အိန္ဒိယအတွက်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းသင်ယူနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ Manager ကို (CLDM) အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်လေ့ကျင့်ရေး - ၎င်း၏ Tech မှကျောင်း
အလယျပိုငျးကမ္ဘာမြေ ConsultantsThere နှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်အိန္ဒိယ၌ပြစ်မှားမိ Carlton အဆင့်မြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန Institute, အမေရိကန်နိုင်ငံ၏လက်မှတ်သင်ယူ & ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Manager ကိုအစီအစဉ်, လိုင်းမန်နေဂျာ, ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့်သင်တန်းဆရာနှင့်ဝန်ထမ်းစိတ်ကျေနပ်မှုများအဆင့်ဆင့်တို့ကပေးထားသောထိရောက်သောသင်တန်းနှင့်လမ်းညွှန်မှုအကြားသိသိသာသာဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပါသည် , ကတိကဝတ်များနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်သောအားဖြင့်လုပ်ငန်းစဉ်များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လေ့ကျင့်ရေးအသုံးအများဆုံးနှင့်တဦးတည်းရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်နောက်ခံပေါ်တွင် မူတည်. connotations ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းများ၏သင်ယူမှုမန်နေဂျာသင်တန်း, အစီအစဉ်၏လိုအပ်မှုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နှင့်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့အထိရောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုလေ့ကျင့်ရေး၏ဖြစ်စဉ်ကိုစည်းရုံးဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယနေ့ L ကို & D ကိုမန်နေဂျာလေ့ကျင့်ရေးမက်ထရစ်မှတဆင့်ထိရောက်မှုကိုပြသသည့်အတွက်မဝယ်ရခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရ
အစီအစဉ်အတွင်းမှာနှင့်အိမ်ပြန်အသုံးပြုမှုများအတွက်ပြည့်စုံသော, သတင်းအချက်အလက်ထုပ်ပိုး courseware Get
တူညီသောနောက်ခံနှင့်အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူအခြားအတတ်ပညာရှင်များနှင့်အတူ Network ကို
တစ်ဦး certified ရရှိထားပြီးသင်ယူမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးမန်နေဂျာအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ် BRAND
ထူးခြားတဲ့ "အန္တရာယ်အခမဲ့" ပိုက်ဆံပြန်အာမခံချက်
HR ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, မန်နေဂျာရဲ့မျဉ်းကြောင်းကြီးကြပ်ရေးမှူးများနှင့်သင်တန်းဆရာ, သင်ယူနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီစီမံခန့်ခွဲ
သင်တန်းအမှတ်စဥ်ကောက်ကြောင်း Duration:2နေ့ရက်များ
Module 1: ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမြေပုံ
အဘယ်ကြောင့်အရည်အသွေး, အရည်အသွေး၏ခွဲခြားရေး - functional ဖြစ်စေ, အမူအကျင့်, တံခါးခုံ, ကွာခြား
JEA, ဝေဖန်အဖြစ်အပျက်နည်းလမ်းစသည်တို့ကို အသုံးပြု. ပေါ်ထွန်းရေးမြေပုံ Creating
Module 2: ကျွမ်းကျင်မှုအကဲဖြတ်
သိမြင်မှုစွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်မှုများ, biodata တူရိယာ, စနစ်တကျအင်တာဗျူးတွေ, အလုပ်အသိပညာစမ်းသပ်မှု, ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ရေးစမ်းသပ်မှုမှတဆင့်ကျွမ်းကျင်မှုအကဲဖြတ်
ပြည်တွင်းရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် variable တွေကိုတဆင့်တဦးချင်းရောဂါအတှကျအ Gilbert ရဲ့မော်ဒယ်
လေ့ကျင့်ရေးအရက်ဆိုင်များနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမြေပုံ, ရွယ်တူချင်းပြန်သုံးသပ်ချက်များ, ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, အထက်သို့အကဲဖြတ်, 360 ဒီဂရီတုံ့ပြန်ချက်မှတဆင့်ဆန်းစစ်ရန်လိုအပ်သည်
In-ဗန်းလေ့ကျင့်ခန်း, အခန်းကဏ္ဍကို-ပြဇာတ်, စာဖြင့်ရေးသားလေ့ကျင့်ခန်းစသည်တို့ကို psychometric စမ်းသပ်မှုအပါအဝင်အကဲဖြတ်စင်တာနည်းစနစ်အမျိုးအစားများ,
, ကျွမ်းကျင်မှုပြမြေပုံများကိုများကဲ့သို့တစ်ဦးအကဲဖြတ်စင်တာကိုဂိမ်း matrix ကိုဖော်ထုတ်, သက်သေအထောက်အထားကို formats ဖန်တီးခြင်းအတွက်ခြေလှမ်းများ
Module 3: သင်တန်းဒီဇိုင်း
လေ့ကျင့်ရေးပုံစံဒီဇိုင်းခြေလှမ်းများ - ရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ၏ setting ကို, သင်တန်း၏မှန်ကန်သော mode ကိုရွေးချယ်ခြင်း
, ကိုထိခိုက်မူအကျင့်များနှင့်သိမြင်မှု - သင်ယူခြင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ထား
ရည်ရွယ်ချက်များဘာတွေလဲ - အတိအကျတိုင်းတာ, အောင်မြင်မှုများ, သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း, အချိန်-ဘောင်း
Modes သာအကဲဖြတ်, ရည်ရွယ်ချက်များသတ်မှတ်ခြင်း, သင်ယူခြင်း၏ Bloom ရဲ့ taxonomy
တစ်ဦးကောင်းဒီဇိုင်း 8 Key ကိုရှုထောင့် - အကြောင်းအရာအလယ်အလတ်အဆင့်, ABC ရုပ်သံအကြားချိန်ခွင်လျှာစသည်တို့ကိုလေ့လာသင်ယူ
ဒါဝိဒ်သည် Kolb ရဲ့သင်ယူမှုစတိုင်များမော်ဒယ် - ကွန်ကရစ်အတွေ့အကြုံ, ရောင်ပြန်အတွေ့အကြုံ, စိတ္တဇစိတ်ကူး, တက်ကြွစွာလက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်
Module 4: သင်တန်းအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ရွယ်
လေ့ကျင့်ရေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲထိန်းချုပ်ရန်, တိုးတက်အောင်, သင်ယူခြင်း, -Proving
လေးပက်ထရစ်လေ့ကျင့်ရေးအကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်၏အဆင့်ဆင့် - တုံ့ပြန်မှု, သင်ယူမှု, အပြုအမူ, ရလဒ်များကို, တုံ့ပြန်မှုအဆင့်ကို - ထိုအစီအစဉ်၏အကဲဖြတ်
စမ်းသပ်မှုများဆောက်လုပ်ရေး, လှုပ်ရှားမှု planning- အဆင့်3အကဲဖြတ်, action ကိုအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်
ရွယ်တွက်ချက်သင်တန်း & ကုန်ကျစရိတ်၏ရွယ်အကဲဖြတ် - ပရိုမိုးရှင်းကုန်ကျစရိတ်, အုပ်ချုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်, ဆရာ, ဆရာမများကုန်ကျစရိတ်, ကျောင်းသားကုန်ကျစရိတ်, အကဲဖြတ်ကုန်ကျစရိတ်
စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုအပါအဝင်နမူနာအစီအမံ, လူတစ်ဦးနှုန်းလေ့ကျင့်ရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, ဝန်ထမ်းတစ်ဦးလျှင်ကဆက်ပြောသည်တန်ဖိုးလှုံ့ဆျောမှုအညွှန်းကိန်း
module 5: သိမှုဆိုင်ရာအာရုံလှေကားခုနှစ်တွင်စီမံခန့်ခွဲမှုယ်ယူရန်
လူ့ Capital ကိုသင့်ဖြစ်မှုညွှန်းကိန်း, အဆင့်သတ်မှတ်မော်ဒယ်များကဲ့သို့မက်ထရစ်မှတဆင့်မော်ဒယ်အတွက် Buy
40 နာရီလက်မှတ်လုပ်ငန်းစဉ်: 16 နာရီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ 24 နာရီ၏လမ်းညွှန်မှုစီမံကိန်းကိုအလုပ်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်